Maxay DF Somaliya ka tiri hadalkii Madaxweynaha Turkiga ee casuumaadka sahminta Shidaalka? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay DF Somaliya ka tiri hadalkii Madaxweynaha Turkiga ee casuumaadka sahminta Shidaalka?
Maxay DF Somaliya ka tiri hadalkii Madaxweynaha Turkiga ee casuumaadka sahminta Shidaalka?
Waa sawir hore, Madaxweyne Erdoğan iyo Madaxweyne Farmaajo
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si maldahan uga jawaabtay hadalkii Isniintii shalay ka soo yeeray Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, ee la xiriiray inay Soomaaliya ku soo casuumtay sahminta shidaalkeeda.
Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay inaanan weli la gaarin xilligii la bilaabi lahaa hawlgalada la xiriira sahminta shidaal baarista ee dalka.
Wasiirka oo la hadlay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed (SONNA) ayaa caddeeyay in mid daahfuran ay noqon doonto sahminta shidaalka dalka.
Wasiirka ayaa wuxuu xusay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu kala dhaxeeyo Dowladda Turkiga, welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa hawlgalada batroolka Soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin hawlo ay muhiim tahay in la dhameystiro.
“Sidaas darteed waxaan xaqiijinaynaa in hawlgalada bartoolka ay ku bilaaban doonaan si daahfurnaan ah, xilligeedana la sugayo.” Ayuu yiri Wasiirka Bastroolka iyo Macdanta Soomaaliya.
arrimaha Batroolka Soomaaliya
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan